Amathiphu wePipette, Okusetshenziswayo kwe-PCR, Amabhodlela e-Reagent - i-ACE
♦ ISuzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd.yinkampani yezobuchwepheshe ezinikele ekuhlinzekeni izinto ezisezingeni eliphakeme ezilahlwayo zezokwelapha nezelebhu ezisetshenziselwa izibhedlela, imitholampilo, amalebhu okuxilonga kanye namalebhu ocwaningo lwesayensi yokuphila.
Have Sinokuhlangenwe nakho okubanzi ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwamaplastikhi esayensi yokuphila futhi sikhiqiza izinto ezisetshenziswayo ezisetshenziswa kalula kwezemvelo nezisebenziseka kalula. Yonke imikhiqizo yethu ikhiqizwa ekilasini lethu elinamakamelo ahlanzekile angama-100,000. Ukuqinisekisa ikhwalithi engcono kakhulu ehlangabezana namazinga wezezimboni, sisebenzisa kuphela izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezingasetshenziswanga ukwenza imikhiqizo yethu…
I-96 Well PCR Plate
350ul 96 Round ipuleti kahle V ngezansi
350ul 96 Round kahle ipuleti U ngezansi
96 Ithiphu Combs
Kusukela yaqala ukusebenza, i-ACE izibophezele ekwakheni nasekuhlinzekeni okudlekayo okuphezulu kwezokwelapha nezelebhu kumakhasimende ethu.
1. Ukunikezela ngobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe
2. Nikeza ikhotheshini lokuncintisana
3. Nikeza ngesevisi enhle kakhulu emva kokuthengisa
Yonke imikhiqizo yethu yenzelwe onjiniyela abanolwazi.
Amakhasimende ethu emazweni angaphezu kwama-20.
OEM INKONZO NOKUZENZAKALELA
I-ACE Biomedical inikeza ububanzi obuningi bama-microplates ajulile ajulile wezinhlelo zokusebenza ezibucayi zokutholwa kwemvelo nezidakamizwa. Ama-microplates ajulile kahle ayisigaba esibalulekile se-plasticware esebenzayo esetshenziselwa ukulungiselela isampula, ukugcinwa kwamakhompiyutha, ukuxuba, ukuthutha kanye nokuqoqwa kwamaqhezu. Bona ...
Yenza Ipayipi Elihlungiwe ...
Elebhu, kwenziwa izinqumo ezinzima njalo ukunquma ukuthi yikuphi okungcono kakhulu kokwenza izivivinyo ezibucayi nokuhlola. Ngokuhamba kwesikhathi, amathiphu we-pipette ajwayele ukufanela amalebhu emhlabeni wonke futhi ahlinzeka ngamathuluzi ukuze ochwepheshe nososayensi babe nekhono lokwenza ucwaningo olubalulekile. Lokhu kukhethekile ...
Ingabe Indlebe iThermometri ...
Lawo ma-thermometer endlebe e-infrared adume kakhulu kodokotela bezingane nabazali ayashesha futhi asebenziseka kalula, kepha ingabe anembile? Ukubuyekezwa kocwaningo kusikisela ukuthi kungenzeka bangabi bikho, kanti ngenkathi ukuhluka kwamazinga okushisa kukuncane, kungenza umehluko endleleni ephathwa ngayo ingane. Ucwaningo ...